Muzvare Joana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri Vanobvisiswa Mari yeChibatiso
Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly, Muzvare Joana Mamombe, pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance, Muzvare Cecilia Chimbiri, vabhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vaviri ava vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Mutongi wedare repamusoro, Justice Tawanda Chitapi, avo vakambonyima vaviri ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vati pane zvasanduka zvaita kuti vavape mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Vatiwo chikuru chavakoshesa pakupa mutongo wavo, chivimbiso chakaitwa nevaviri ava chekuti havachazopari mhaka yakanafanana neiyi zvakare.
Gweta revaviri ava, VaAlec Muchadehama, vati kunze kwekubharamari yechibatiso, vaviri ava vanziwo vaende kunomhan’ara kukamba yemapurisa yeHarare Central nemusi weChishanu wega wega pakati penguva dza6 mangwana kusvika 6 manheru.
Amai vaMuzvare Mamombe, Amai Kudzai Chiwanza, vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti mwana wavo anga atambura kujeri reChikurubi.
Amai VaMuzvare Chimbiri, Amai Patricia Chimbiri, vati vari kutenda vanhu vese vakamira navo apo vana vavo vange vari mujeri.
Amai Chimbiri vati vanovimba kuti aka ndekekupedzesera vaviri ava vachishungurudzwa.
Imwe nenhengo yeparamende yeMDC Alliance iyo yange iri mudare nhasi, VaDaniel Molokole, vati kunyange hazvo vari kufara kuti vaviri ava vabhadhara mari yechibatiso, zvinosuwisa kuti vaviri ava vakagara mujeri kwenguva yakareba vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vanga vagara mujeri kwenguva inodarika mwedzi miviri zvichetevera kusungwa kwavo musi wa28 Kukadzi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzvirira kupararira kweCovid-19.
Zvichakadai, kutongwa kwavo panyaya iyi kwange kuchitarisirwa kutanga mudare ramajisitireti nhasi. Asi magweta avo ari kuda kuti nyaya iyi iraswe.